Galmudug oo Hanjabaad u Dirtay Maleeshiyaad Dagaal Hurinaya+Dhageyso – Radio Simba 95.0 MHZ – Simbanews – Idaacada Simba
Armenia oo Turkiga ku eedeysay in uu diyaarad dagaal ka soo riday
Dab Qasaare Xoogan Geeystay Oo Ka Kacay Bartamaha Magaalada Dhuusamareeb
Maamulka Hirshabeele Oo Ku Dhawaaqay in Ay Wadaan Qorshiihii Ugu Dambeyay Ee Doorashada Maamulkooda
Madaxweyne Farmajo Oo Ka Tacsiyadeeyay Geeridii Ku Timid Amiirkii Dalka Kuwait
Al-shabaab oo Xukun Dil ahaa Ku Fuliyay Eedeysane Xasan Aadan Cali
Lafta Gareen:-“Kuraasta Qaarkood Dadka ku Fadhiya Waa Looga Xaq Leeyahay”,!
Akhriso:-Duulimaadyadii Diyaaradaha Gudaha Dalka oo Hakad Ku Jira
Galmudug oo Hanjabaad u Dirtay Maleeshiyaad Dagaal Hurinaya+Dhageyso
Maamulka Galmudug ayaa sheegey in ay tilaabo adag ka qaadayaan cid kasta oo ku howlan in ay dib usoo cusbooneysiiyo colaadihi ka taagnaa Gobolka Mudug ee u dhaxeeyey Maamulada Puntlan iyo Galmudug.
Maleeshiyaadkan ayaa lagu eedeynaya in ay doonayaa in ay Dib uhuriyaan colaadaha Beelala walaalaha ahaa ee ku wada dega qeybo ka mid ah deeganada Gobolka Mudug kuwaas oo horey uu u dhexmarey heshiis ku aaadan in aysan dib usoo laaban wixi horey udhacay.
Wasiirka Warfaafinta Dowlad Goboledka Galmudug Axmed Shire Falagle oo la hadlay idaacadda Simba ee Magaalada Muqdisho ayaa sheegey in ay gacan adeg ku qaban doonaan cid walbo oo ku howlan in qalalaaso iyo colaad ay ka dhex abuurto Maamulada Puntland iyo Galmudug deeganada ay dariska ka yihiin sidoo kalana ay labada Maamul Go’aan wada jira ka qaadanayaan Kooxaha Maleeshiyadka ah ee dilalka iyo Dhibaatoyinka ka geysanya sidii hal meel looga soo jeedsan lahaa.
Waxa uuna sheegey in ay Bartilmaameedsan doonan cid walbo oo ay u arkaan in ay tahay kuwo kasoo horjeedo xasilaanida Gobolka Asaga oo na tilmaamay Haddii ay dhici jirtay in labada Maamulka Dhexdooda Maleeshiyad wax dila ay ku dhuumaaleysan jireen aysan hada ka dib dhici doonin.
Maamulada Galmudug iyo Puntland ayaa ku howlan in ay xoojiyaan nabada Gobolka Mudug kadib markii heshis la dhex dhigay beelihi ku dagaalami jirey Galbeedka Gobolka Mudug sidoo kalana Mamulka Galmudug ayaa sheegay in ay ka shaqeynayan sidii ay u hirgali lahaayeen Nabadka iyo Heshiiska Gobolka Mudug.